Imbonakalo yepanoramic yeVilla Serra yeentaba zeSibillini
Relax kule ndawo ezolileyo esembindini kwiSibillini National Park, sisakhiwo esizimeleyo esinendawo enkulu yangaphandle kunye nembono entle ejongene neSibyl kunye noMthwali.
I-Villa ikwi-hamlet encinci ehlala abantu abangama-20 kuphela ngonyaka, indawo ezolileyo, enoxolo ejikelezwe buhlaza phakathi kwamadlelo kunye neenkuni.
Ilungele abo bathanda uxolo kunye nokuphumla, kubandakanya ukuhamba okuthe cwaka, ukutya kunye nokungcamla kwewayini kunye nokukhwela ibhayisekile yeentaba.
I-villa imalunga ne-150sqm kwimigangatho emibini. Indawo yokuhlala ekumgangatho ophantsi enekhitshi exhobe ngokupheleleyo (isitovu, isinki, iiyunithi eludongeni, ifriji kunye nomatshini wokuhlamba izitya), igumbi lokuhlala elikhulu elinendawo yomlilo kunye negumbi lokuhlambela lenkonzo. Indawo yokulala yokuqala enamagumbi amabini okulala, enye iphindwe kabini kwaye enye ineebhedi ezimbini zokulala, igumbi lokuhlambela elineshawa kunye nethafa. Indlu ijikelezwe yigadi enkulu ene-gazebo, itafile, izitulo kunye nezitulo zomgangatho.
Ilali encinci iphambi koluhlu lweentaba zaseSibillini, kwindawo epholileyo nenoxolo, ijikelezwe yindalo phakathi kwamadlelo kunye neenkuni.
Ndiya kunikela ngokwam izitshixo ze-villa kwaye ndiya kuhlala ngomnxeba ukuxhasa iindwendwe ngolwazi kunye neengcebiso zokufumana ngokupheleleyo iSibillini National Park kunye nezixeko ezikufuphi kuzo zonke iindawo zokujonga, oko kukuthi, imbali, ezemidlalo, ukutya kunye newayini, i-landscape. kunye nokunyuka intaba.
Ukongeza, ngaphakathi kwesakhiwo, iindwendwe ziya kufumana ulwazi oluluncedo lommandla olunjengoluhlu lweenkonzo ezibhukishwayo, ezinje ngerenti ye-quad, ukukhwela ihashe, njl. njl., kunye noluhlu olukhethiweyo lweendawo zokutyela ezahlulwe ngokweendidi ezinjengeTrattorias, Gourmet. Amarestjurandi, pizza, pubs.
Iindwendwe zingaqhakamshelana nam apha +39 3396661857 okanye zindibhalele i-imeyile kule dilesi realestateamici@gmail.com
Ndiya kunikela ngokwam izitshixo ze-villa kwaye ndiya kuhlala ngomnxeba ukuxhasa iindwendwe ngolwazi kunye neengcebiso zokufumana ngokupheleleyo iSibillini National Park kunye nezi…